International Celebrity – WunYan
Category: International Celebrity
နေတိုးနဲ့ ဒိတ်လုပ်ချင်တယ်လို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောလိုက်တဲ့ ထိုင်းမင်းသမီးလေး ကာရာဗီ
ဥပါယ်တံမျဉ်ကားထဲက ထိုင်းမင်းသမီးလေး ကာရာဗီဟာ မြန်မာ့အနုပညာလောကမှာ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိနေပါတယ်။ ပွင့်လင်းရိုးသားပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဟန်ပန်လေးကြောင့် မြန်မာပရိသတ်တွေရဲ့ တခဲနက်အားပေးမှုကိုလည်း ရထားသူလေးပါ။ မြန်မာနိုင်ငံက ဝက်သားဒုတ်ထိုးကိုအရမ်းကြိုက်တဲ့ ကာရာဗီတစ်ယောက်က မြန်မာပြည်ရောက်တိုင်း ဝက်သားဒုတ်ထိုးဆိုင်တွေပဲ သွားစားလေ့ရှိတာကို သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ အမြဲတွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ မြန်မာအမျိုးသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူမကတော့ “မြန်မာအမျိုးသားတွေ အများကြီးကို တွေ့ဖူးတယ်။ ချောတဲ့သူတွေ သဘောကောင်းတဲ့သူတွေ အများအားဖြင့် သူတို့တွေက အရမ်းသဘောကောင်းတယ်။ အရမ်းကြင်နာတတ်တယ်။ အဲဒါကြောင့်…
ငယ်ငယ်က အရမ်းဆင်းရဲခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာကျော်မင်းသမီး Shu Qi ချွတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အဝတ်အစားတွေကို တစ်ထည်ချင်းစီ ကျွန်မ ပြန်ဝတ်မယ်
Posted on July 23, 2018 by whuk-46651
ချွတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အဝတ်အစားတွေကို တစ်ထည်ချင်းစီ ကျွန်မပြန်ဝတ်မယ်။ ဒီစကားကို ထိုင်ဝမ်မင်းသမီး Shu Qiက ပြောခဲ့တယ်။ သူငယ်ငယ်တုန်းက အရမ်းဆင်းရဲခဲ့တယ်။ အတန်းပညာလည်း ကောင်းကောင်းမသင်ခဲ့ဖူးဘူး။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖို့ ကြုံရာအလုပ်တွေလုပ်ရင်း ဟောင်ကောင်ကလာတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့ သူရင်းနှီးခဲ့တယ်။ အဲဒီလူက သူ့ကို အနုပညာလောကထဲဝင်ဖို့ ကူညီခဲ့တယ်။ အနုပညာလောကသာဆိုတယ် တကယ်တမ်းမှာ ရုပ်ရှင်ရိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ မပေါ်တပေါ်တွေဝတ်ပြီး မဂ္ဂဇင်းအတွက် ဓာတ်ပုံရိုက်တာပဲဖြစ်တယ်။ နာမည်မထင်မရှားနဲ့နေရတဲ့ကာလမှာ အဖော်အချွတ်ကားဖြစ်တဲ့ Viva Eroticaဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို သူရိုက်ခဲ့တယ်။…
ဂျက်စတင်ဘီဘာနှင့် မော်ဒယ်လ် ဟိုင်လေဘောလ်ဝင်းတို့ စေ့စပ်
ကနေဒါ ပေါ့အဆိုတော် ဂျက်စတင် ဘီဘာနဲ့ အမေရိကန်မော်ဒယ် ဟိုင်လေ ဘောလ်ဝင်း တို့ စေ့စပ်လိုက်ကြတယ်လို့ အမေရိကန်မီဒီယာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ အသက်(၂၄)နှစ်အရွယ် ဘီဘာက ဘာဟားမားစ် အပန်းဖြေစခန်းမှာ အသက်(၂၁)နှစ်အရွယ် မော်ဒယ် ဘော်လ်ဝင်းကို စေ့စပ်လက်စွပ် ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦး စေ့စပ်လိုက်တဲ့ သတင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘီဘာရဲ့ မိဘတွေက ၀မ်းမြောက်ကြောင်း လူမှုကွန်ရက်မှာ ဖော်ပြခဲ့သလို ဘောလ်ဝင်းရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူကလည်း…
အိန္ဒိယနာမည်ကျော် ရုပ်ရှင်မင်းသမီး စရီးဒေဝီ ရုတ်တရက် ကွယ်လွန်
Posted on February 25, 2018 by whuk-46651
အိန္ဒိယ နာမည်ကျော် ရုပ်ရှင်မင်းသမီး စရီးဒေဝီ ရုတ်တရက် ကွယ်လွန်သွားသည်ဟု သိရပါသည်။ ကွယ်လွန်ချိန်မှာ အသက် ၅၄ နှစ်အရွယ်ရှိပြီး ဒူဘိုင်းတွင် မင်္ဂလာပွဲတက်ရောက်နေစဉ် နှလုံးဖောက်ပြီး ကွယ်လွန်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ သူမရုပ်အလောင်းအား ယနေ့ချင်း အိန္ဒိယသို့ ပြန်လည်သယ်ဆောင်လာပြီး ဈာပနပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။ သူမကွယ်လွန်ခြင်းသတင်းနှင့်အတူ ပရိတ်သတ်တွေ အပြောများဆုံးကိစ္စတစ်ခုက သူမနဲ့ အတွဲများဆုံး သရုပ်ဆောင်နေကျ မင်းသားကြီး အမီတာဘာချန်းက သူမမကွယ်လွန်မှီ မိနစ် ၂၀…
Shinee အဖွဲ့ဝင် Kim Jong-hyun သေဆုံး
Posted on December 19, 2017 by whuk-46651
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံက ထင်ရှားတဲ့ K-pop အမျိုးသား အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Shinee အဖွဲ့ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး သေဆုံးသွားတယ်လို့ နိုင်ငံပိုင်ယွန်ဟတ် သတင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ Shinee အဖွဲ့ဝင်(၅)ဦးထဲက အသက်(၂၇)နှစ် အရွယ် Kim Jong-hyun ဟာ မနေ့က ဒေသစံတော်ချိန်ညနေ(၆) နာရီ ကျော်လောက်မှာ ငှားရမ်းထားတဲ့ စတူဒီယို အခန်းအတွင်း မေ့မြောနေတာကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် သူ့ကို အနီးအနားရှိ ဆေးရုံကို…
အပြာလောကထဲ ဝင်ရောက်ဖို့အတွက် ဥပဒေကျောင်းသူဘဝကို စွန့်ပစ်ခဲ့သူ
Posted on September 29, 2017 by whuk-46651
အပြာလောကထဲ ဝင်ရောက်ဖို့အတွက် ဥပဒေကျောင်းသူဘဝကို စွန့်ပစ်ခဲ့သူ Game of Thrones ဇာတ်လမ်းတွဲကို အဆက်မပြတ် ကြည့်ခဲ့ဖူးသူတွေဆိုရင် မင်းသမီး Ella Hughes ကို ကောင်းကောင်းကြီး မှတ်မိနေမယ်ထင်ပါတယ်။ သူမှာ GOT ဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာ ပြည့်တန်ဆာတစ်ဦးအဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး သူမအနေနဲ့ ဘာကြောင့် အပြာဇာတ်ရုပ်ကို ရွေးချယ်ခဲ့သလဲဆိုတာကို ရှင်းလင်းပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၂၂ နှစ်အရွှယ်ရှိ အင်္ဂလန်နိုင်ငံသူ Ella ဟာ…
နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်မဖြစ်ခင် အပြာကားသရုပ်ဆောင်ဖြစ်ဖူးခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်များ
Posted on August 20, 2017 by whuk-46651
နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်မဖြစ်ခင် အပြာကားသရုပ်ဆောင်ဖြစ်ဖူးခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်များ 1. Helen Mirren Helen ပာာကမ္ဘာ့သရုပ်ဆောင်အကောင်းဆုံးဆုကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူမပာာ အကယ်ဒမီပေါင်းများစွာနဲ့ အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်ဆုများစွာရရှိခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့အကြောင်းလူတွေသိပ်မသိလိုက်တဲ့အချက်ကတော့ သူမပာာအရင်ကအပြာလောကမှာ သရုပ်ဆောင်ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ 2. Sylvester Stallone လူငယ်ကောလူကြီးကောအလွန်ကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ စတားလုံးပာာ ရုပ်ရှင်ပေါင်းများစွာရိုက်ကူးရင်အောင်မြင်ခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် ပောာလီဝုဒ်မှာဆိုစတားလုံးပာာနာမည်အရမ်းကျော်ကြားခဲ့ပါတယ်။သူမကို Rocky ဇာတ်ကား ရမ်ဘိုဇာတ်ကားတွေမှာပိုမိုအသိများပြီးနာမည်ကြီးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စတားလုံးပာာ သူရဲ့တိုက်ခန်းကနေအကြွေးမပေးနိုင်လို့နှင်ချခံရဖူးပြီး ရက်ပေါင်းများစွာတိုင် လမ်းမပေါ်မှာရှာဖွေစားသောက်ခဲ့ရပါတယ်။သူပာာပိုက်ဆံဝင်ငွေရဖို့အတွက် ၁၉၇၉ခုနှစ်မှာရိုက်ကူးခဲ့တဲ့အပြာဇာတ်ကား “Role in thesoft core Pornographyစတူတီယိုကရိုက်ကူးတဲ့ The…
တိုက်တန်းနစ်မင်းသားနှင့် မင်းသမီး ပြန်ဆုံကာ အတူအပန်းဖြေ
ကိတ်ဝင်းစလက်နဲ့ လီယိုနာဒိုဒီကပ်ရီယိုတို့ဟာ ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှ ထွက်လာတဲ့ တိုက်တန်းနစ်ဇာတ်ကားကြီး ကတည်းကစပြီး ရင်းနှီးလာလိုက်ကြတာ သူတို့သံယောဇဉ်ကြိုးဟာနှစ်ပေါင်း ၂၀ ကြာတဲ့အထိ ခိုင်ခံ့နေတုန်းပါပဲ။ ကမ္ဘာကျော် မင်းသားနဲ့မင်းသမီးက ပြင်သစ်မှ အတူအပန်းဖြေခဲ့ကြတာပါ။ အသက် ၄၂ နှစ်အရွယ် မင်းသားကြီးက သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူဖြစ်ပြီး အဲဒီအတွက် ဖောင်ဒေးရှင်းထောင်ထားပါတယ်။ ဖောင်ဒေးရှင်းအတွက် ပွဲကို နှစ်တိုင်း တခမ်းတနားကျင်းပပြီး အဲဒီပွဲကို အသက် ၄၁ နှစ်အရွယ် ကိတ်ဝင်းစလက်လည်း လာအားပေးတာပါ။ သူတို့က သူတို့နဲ့အတူ…
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၂ နှစ်ကသာ ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြမယ်ဆိုရင် လက်ထပ်လို့မရနိုင်တဲ့ ဆောင်းဂျွန်ကီနှင့် ဆောင်းဟေကျို
မကြာခင် လက်ထပ်တော့မယ်လို့ ကြေညာခဲ့တဲ့ တောင်ကိုရီးယား သရုပ်ဆောင်စုံတွဲ ဆောင်းဂျွန်ကီနဲ့ ဆောင်းဟေကျိုတို့ဟာ နှစ်ယောက်စလုံး ၃၀ ကျော်တွေ ဖြစ်နေကြပေမဲ့ သူတို့တွေ အသက် ၂၀ လောက်သာ တွေ့ဆုံ ချစ်ကြိုက်ခဲ့ကြမယ်ဆိုရင် ဥပဒေအရ လက်ထပ်ခွင့်လည်း မရှိပါဘူး။ ယခင်က တောင်ကိုရီးယားဥပဒေအရ နောက်ဆုံးနာမည်တူပြီး မျိုးနွယ်လည်းတူတဲ့ သူတွေကို လက်ထပ်ခွင့်မရှိပါဘူး။ တောင်ကိုရီးယားမှာ နောက်ဆုံးနာမည် ကင် (Kim) ပါတဲ့ မျိုးနွယ်…